चार एआईजीका लागि दस डीआईजीको प्रतिस्पर्धा, को–को बन्दैछन् एआईजी ?
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ जेठ २८ सोमबार |
काठमाडौं, २८ जेठ । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कायम भएको एआईजीको दरबन्दीमा भारी कटौती गरेको छ । नेपाल प्रहरीका प्राविधिकसहित पाँच र सशस्त्र प्रहरीमा दुई जना एआईजी राख्ने गरी गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो । ने
पाल प्रहरीमा अब प्रशासनतर्फ चार मात्र एआईजी रहनेछन् । यसअघि १५ जनासम्म राखिएको थियो । सरकारको यो निर्णयसँगै प्रहरीमा एआईजी पदले महत्व पाएको छ । यसअघिको सरकारले ११ बटा १५ दरबन्दी बनाउँदा त्यसको महत्व घटेको थियो ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीमा तत्कालका लागि तीन जना र पछि दुई जना राख्ने सहमति भएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा हाल आठ एआईजी छन् । दरबन्दी संख्या तय भएसँगै नेपाल प्रहरीमा बढुवाको तयारी सुरु भएको छ । कति जना एआईजी राख्ने भन्ने निर्णय नभएका कारण नेपाल प्रहरीका एआईजीहरुको पदहरु रिक्त छन् ।
प्रशासनतर्फ चार मात्र एआईजी रहने भएकाले बढुवामा डीआईजीहरुबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । चार पदमा १० जना डीआईजी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
आईजीपीका प्रतिस्पर्धी समेत रहका पुष्कर कार्की, उत्तम कार्की, पवनप्रसाद खरेल, छविलाल जोशी, मनोज नेउपाने, ज्ञानविक्रम शाह, ठूले राई, शरद चन्द, धिरु बस्नेत, सुरेशविक्रम शाहलगायत डीआईजीहरु एआईजी बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।
उनीहरुमध्ये उत्तम कार्की, छविलाल जोशी, पवन खरेल र शरद चन्दले ३० वर्षे सेवा हदका कारण आगामी असार ३० गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने छन् । सरकारले दरबन्दी चार मात्रै बनाएका कारण उनीहरु एआईजी हुने सम्भावना घटेर गएको छ ।
एआईजीको बढुवा प्रक्रिया सम्पन्न हुन कम्तीमा असारको दोस्रो साता लाग्छ । त्यसकारण उनीहरुलाई दुई साताका लागि एआईजीमा बढुवा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अन्योलमै रहेकाले सरकारले उनीहरुलाई डीआईजीबाटै घर पठाउने संकेत गरिसकेको छ ।
बढुवा गर्दा अरु छुट्न र राज्यलाई पनि भार पर्ने अवस्था छ भने बढुवा नगर्दा उनीहरुमाथि अन्याय हुने अवस्था देखिए पनि उत्तम, पवन, छविलाल तथा शरदको विगत पनि सन्तोषजनक नदेखिएकाले उनीहरुको बढुवामा ब्रेक लाग्ने सम्भावना बढेको हो ।
चारमध्ये पुष्कर कार्की, ठूले राई, धिरु बस्नेत, सुरेशविक्रम शाह लगभग निश्चित जस्तै भए पनि मनोज न्यौपानेले पूर्वमाओवादी समूहसँग निकट सम्बन्ध राखेका कारण उनलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने सम्भावना पनि छ । उता, सशस्त्र प्रहरीमा भने एआईजीको पदस्थापनमै समस्या छ ।
हाल आठ जना एआईजी छन् । अब तीन वटा मात्र विभागमा एआईजी राख्ने भएपछि अरुलाई के गर्ने भन्ने अन्योल थपिएको छ । सरकारले गत माघ १७ गते जानकी भट्टराई, निराक्रम विक्रम शाह, सुबोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठलाई एआईजी बढुवा गरेको थियो ।
बढुवा भएपछि उनीहरुलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । जिम्मेवारीविहीन भएका उनीहरुलाई प्रधान कार्यालयमा हाजिर गराएर राखिएकोा छ । दरबन्दी भन्दा एआईजीहरु धेरै भएपछि राज्यलाई पनि आर्थिक भार बढेको छ ।
पाँच फाजिल एआईजीबाट राज्यलाई मासिक १५ लाखभन्दा बढी आर्थिक भार पर्ने गरेको समाचार स्रोतले बताएको । एउटा एआईजीको दरबन्दी थप गर्दा मासिक तीन लाखसम्म आर्थिक भार बढ्ने गर्छ । एआईजी थपसँगै डीआईजी, एसएसपी, एसपीलगायतका पद बढ्ने भएकाले आर्थिक भार बढ्ने गरेको हो ।
त्यसैगरी गाडी, कार्यालय सहयोगी, आवासलगायतका खर्च गरेर एक एआईजी बराबर तीन लाख खर्च बढ्ने बताइन्छ । यसरी थप गरिएको पाँच एआईजीबाट मासिक १५ लाख आर्थिक भार पर्दै आएको छ ।
डीआईजी सरुवामा झेल
सुरुमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी केदार रिजाललाई मेट्रोमा पक्का गरिएको थियो । त्यसमा आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल पनि सहमत थिए । १ नम्बर प्रदेशमा पिताम्बर अधिकारीको पक्का भइसकेको थियो ।
त्यसपछि डीआईजी केदार रिजालले झट्का दिए १ नम्बरमा र पिताम्बर पुगे विशेष ब्यूरोमा । मनोज न्यौपाने पूर्वमाओवादीको कोटामा मेट्रोमा सरुवा भइछाडे, तरुणमा उल्लेख छ ।
यसरी डीआईजी सरुवामा आईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई गृह मन्त्रालयले कमजोर बनाइदिएको चर्चा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फैलिएको छ ।
श्रोत नखुलेको अमेरिकी डलर सहित २ जना पक्राउ :
भरतपुर कारागारमा कैदीबन्दीलाई ब्याबस्थित गर्न सकस ,मकवानपुरमा पनि उस्तै !
प्रधानमन्त्रीद्वारा कर दिवसको शुभकामना, आर्थिक रुपान्तरणतर्फ अग्रसर हुन आह्वान
प्रहरीबाट फेरी षड्यन्त्रको गन्ध , दिलिपका दाइले खोले सनसनीपूर्ण रहस्य [हेर्नुहोस् भिडियो]
गिट्टी बालुवा बोक्दै चर्चित गायक नवराज बिष्ट, भन्छन् : गीतले मात्र खान पुग्दैन रहेछ (भिडियो सहित)
दुई वर्षे कार्यकाल चार पदाधिकारीमै सीमित तरुण दल
विभिन्न मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतः वीरेन्द्रका ७१ रोपनी जग्गा ट्रष्टमा
चीन सरकारमार्फत नेपालमा गाई ल्याउन लागेको भन्दै कृषकहरूको बिरोध
'झोला बोक्ने क्यारियरमा नेपालीको लास'
टिभी घुस माग्ने डिएसपी राईविरुद्ध मुद्दा दायर